Bilaabidda Ganacsiga / CBD
Waxaa laga yaabaa in lagu jirrabaya degdegin ka mid ah suuqa CBD ka hor inta ay goori goor tahay, laakiin raacdaa tilmaamaha soo socda haddii aad rabto in lagu bilaabo sayrin ah oo aan splat a.
credit image: OlegMalyshev | Getty Images
7 January 2019 6 min reading
Waa ay fududahay in la arko iman kara ee warshadaha CBD dhacyaan. Dhisidda brand xooggan ee suuq dadku ku badan yahay qeybta ugu adag. In bilaabay aan CBD brand u gaar ah, Waxaan wax badan ka bartay iyada oo maxkamad iyo qalad. Iyadoo talooyinkan ma ballan qaadi doonaa guushaada, waxaan rajaynaynaa in ay kaa caawin doontaa in aad ka fogaato dhacyada caadi ah oo aad saaray Jidka launch a dhakhso ah oo waxtar leh.
la xiriira: Sidee si ay u bilaabaan iyo suuq shirkadda CBD
1. Ballaariyo aqoontaada
Fahmaan in dhab ahaantii CBD waa talaabada ugu horeysa ee soo koraya brand guul. ii, waxa ay bilowday la taxane ah oo raadinta Google, barashada oo dhan aan laga yaabaa saabsan CBD ah: faa'iidadiisa, taariikhda, ay habka fiirsato kala duwan, iyo in ka badan. Ensuite, waxaan la kulmay khubaro badan iyo shirkadaha kale ee ganacsiga. Waxay qaadatay laba bilood ka hor cilmi aad u ogaato oo ku filan oo ku saabsan wax soo saarka si aad u hesho bixiyaha. Tani waxay inoo ogolaatay inuu sameeyo go'aano sida aynu ka baxday.
Waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan dadka cusub ee warshadaha CBD in ay ka akhri guide Ultimate CBD . Hagahani wuxuu ka kooban yahay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan CBD ah, taariikhda, wax soo saarka iyo faa'iidooyinka caafimaad ee ay. Tani waa tallaabo aad u fiican marka hore in la ballaariyo aqoontaada.
2. Qaado tallaabo hore
Haddii aad dhabtii doonaysid si aad u bilowdaan CBD ganacsi u gaar ah, waa in aad bilowdo. Waxaan la hadlay dad badan oo dooratay, waqti u huray falanqaynta qaybaha iyo isku dayaya in ay go'aan kasta oo kaamil. sida, weligoodna ma wax samayn.
Ha u ogolaan wanaagsanaanta idinka ilaaliyo horumarinta. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato (eeg xagga sare), laakiin aad uma baahna in ay gabi ahaanba la ogaado wax walba waxaa jira in la ogaado. Hel aad alaabta suuqa. Waxaad baran doontaa inta badan waxa aad u baahan tahay in aad ogaato sida iyo.
3. Dooro magacaaga si caqli ah
Waxa aad wici shirkadda CBD saamayn weyn ku awoodda aad horay u socdo yeelan doonaan. Xaqiiqda murugada leh ee maanta waa in bangiyada ma doonayo in aan qof ku iibisa CBD shaqeeyaan. Si le nom de votre entreprise contient les mots “CBD”, “chanvre”, “cannabis” ou toute autre référence explicite à CBD, bangi u badan tahay soo jeedin doonaa qaadashada ganacsi meelo kale.
Dooro magac aan kor calamada casaanka iyo waxaad si fudud u qaadi karaan. Bal yaa og waxa ganacsigaaga eegi doonaa sida in shan ama toban sano? Nous avons choisi “Joy Organics” parce que c’était simple, fududahay in la xasuusto oo ay fududahay in muddo. Waxa kale oo si fudud u kordhiyay si ay alaabooyinka kale ee, ay ka mid yihiin kuwa waxba u qaban la CBD leeyihiin.
Ogeysiis final: Haddii aad hesho magaca kaamil ah, laakiin aad ogaato in website-ka aan la heli karin, waxaa laga yaabaa inaad nasiib jirin. Haddii website waa user, laakiin waxa aan la isticmaalo, la xiriir milkiilaha si loo arko haddii uu diyaar u ah inay iska iibiso waa. Waxaa xusid mudan kharash magaca wanaagsan.
la xiriira: 6 su'aalaha ka hor inta magaca aad cannabis shirkadda
4. Dhig LLC
Calan aad LLC sida ugu dhaqsaha badan aad magacaaga leeyihiin. baahida loo qabo ma ay ahaan geedi socodka qaali ah iyo niyad jebinaysaa. Waxaan isticmaalaa in lagu rights reserved annagaa Legal Zoom. Tani waxa ay ahayd xulashada ugu qiimo jaban oo qaatay in ka yar 20 daqiiqo. Our codsiga markiiba cid diray oo lambarka aqoonsiga loo shaqeeyaha our ee ku saabsan 10 maalmood. Dhab ahaan waxaa jiray uma baahna in la bixiyo lacag ah u qaali ah, waayo tallaabo this.
5. U samaynta aad logo
Iyadoo fursado badan oo la heli karo, tallaabo Tani waa mid fudud oo aanu ku kici maal a. suuqyada online sida Fivver ama 99 Naqshado siiyaan boqolaal adeegyada samaynta madax banaan. Waxaan raacay 99 sawiro. Adeeggu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhigay qiimaha adiga kuu gaar ah, ka dibna waxaad heli doontaa noocyo ka mid ah samaynta dunida oo dhan. Waxaad yareeyo natiijada in ay logo sida ugu fiican kugu habboon. Marxaladani waxay qaadataa saddex ilaa shan maalmood, laakiin wuxuu noqon karaa mid ka qaalisan Fivver.
6. U samaynta aad website
design Web site waa meel kale ee shirkadaha cusub ee aad soo galla karo. Ma loo baahan yahay in la abuuro website cusub ka xoq. Hel on Google oo raadi daydo. Isticmaal bilaash ama raqiis sida WordPress, Squarespace aad Wix. Raadi naqshadeeye ah oo isticmaali kartaa template iyo buuxi content iyo images.
Muhiim u ah tallaabo this: ganacsiyada CBD hadda ma isticmaali kartaa Shopify in ay gaadhigii shopping. Waxaan ku talinaynaa isticmaalaya WooCommerce halkii.
7. Dooro lamaanahaaga saxda ah
Tani waa mid ka mid ah go'aanada ugu muhiimsan ee aad ka dhigi doonaa marka la bilaabayo ganacsigaaga DBC. In our dukaanka leben iyo malaastiisa, 50% oo dhan of our gaadiidka ka timaada macaamiisha daacad. isha labaad ee gudbinta gaadiidka Our. sababta? Maxaa yeelay, dadku waxay jecel yihiin natiijada ay ka heli, si ay dib u yimaadaan more.
Habka ugu fiican ee guul darreysato waa in ay bixiyaan alaabta aan shaqayn. Your brand kori doono sida dadka sii si ay u iibsadaan.
la xiriira: 5 muhiim ah in aad doorato CBD ugu fiican tafaariiqle
8. Raadi CBD processor loo arko
Qaybta ugu walaaca badan ee furitaanka Joy organics ahaa ururka of account baayacmushtarka ku our. In Maraykanka, waxaa jira tiro la yaab yar oo ah bangiyada ka qabashada iibinta CBD. warshadaha waa horyaalka haddeer dheregsan: dadka ayaa kuu sheegi doona wax, ka dibna u noqon waayeen oo kale sameeyo. Waa in aad ka taxadartaa in aadan is wada dooxay off.
Oo aad uma isticmaali karo Square ama shirkad kale daaweynta caan ah: iyagu ma iibin doonaa CBD. Halkii waxaa ka mid ah, aad leedahay si aad u hesho processor a qabata processing si gaar ah CBD. dheeraad ah, aad leedahay si aad u hesho processor ku salaysan ee Maraykanka.
Haddii aad isku daydo mid processor dibadda ku salaysan (UK, Mexico iyo Asia waa meelo caan ah), waxaad ka heli doontaa in ku saabsan 30% iibka loo diiday doonaa. Half of macaamiisha, kuwaas oo soo wici doona shirkadda kaarka deynta, dhihi ma aha been abuur ah, iyo ma soo laaban doonaa si ay u dhamaystiraan ay gadashada. ah 15% haray iibka laga badiyay. dheeraad ah, macaamiisha mid kastaa wuxuu heli doonaa fii dibadda. Ma jirto xaalad this dhisay xiriir wanaagsan.
9. Ka bilow waxyaabaha caanka ah
Inkasta oo waxaa iyagoo jirrabaya si ay u abuuraan qaaciidooyinka adiga kuu gaar ah, ma dhicin dabin this. our waayo-aragnimo, wax soo saarka, kuwaas oo aan la suuq. Eekaan alaabta iibiya fiican.
Currently, formaldehyde waa nooca ugu caansan ee alaabta CBD. labaad waa kaabsoosha. Labadan meelaha yihiin meel fiican si ay u bilaabaan. Xusuusnow in aad Ujeedada waa in ay tagaan suuqa. Marka aad la aasaasay, waxaad bilaabi kartaa tijaabinayaan waxyaabaha la xaqiijiyay yar.